My iPad Haizoshanduke! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
iphone voicemail isiri kuratidza ku & t
tsvaga yangu iphone login kubva pakombuta
Sei iphone yangu isiri kubatana neangu wifi?
My iPad Haizoshanduri! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako iPad haisi kutendeuka uye iwe hauzive nei. Uri kudzvanya uye wakabata bhatani remagetsi, asi hapana chiri kuitika. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei yako iPad isinga batike uye ikuratidze maitiro ekugadzirisa dambudziko zvachose !
Sei Wangu Isingaite Iyo My iPad Kutendeuka?
Zvakaoma Reset Yako iPad
Tarisa Yako iPad's Chaja
Tarisa Yako Yekuchaja Cable
Pane Pane Nyaya Nekuratidzira?
Yepamberi Dambudziko rekugadzirisa Matanho
Nguva yakawanda, iyo iPad haizoshanduke nekuti software yayo yakarova. Izvi zvinogona kuzviita kuoneka kunge yako iPad isiri kubatidza, nepo yaive chaizvo panguva yese!
Zvakaoma kumisikidza yako iPad ichaimanikidza kuti ikurumidze kudzima uye kudzokerazve. Panguva imwe chete pinda uye ubatisise bhatani reKusha uye bhatani remagetsi kusvikira iwe waona logo yeApple ichioneka yakananga pakati pekona. Yako iPad inodzoka kumashure nguva pfupi yapfuura!
Kana yako iPad isina bhatani reKumba, kurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, nekukurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata Bhatani repamusoro kusvikira iyo Apple logo iratidzike pachiratidziri.
Ongorora: Dzimwe nguva unofanirwa kumanikidza nekubata mabhatani ese maviri (iPads ine Bhatani repamba) kana iyo Bhatani repamusoro (iPads isina bhatani reKumba) kwemasekondi makumi maviri nemakumi matatu chiratidzo cheApple chisati chaonekwa.
Kana Iyo Yakaomarara Reset Yashanda…
Kana yako iPad ikatendeuka mushure mekunge waita yakaoma reset, waona kuti kuparara kwesoftware kwaikonzera dambudziko. Kugadziridza kwakaomarara ingangoita mhinduro yenguva pfupi yekuparara kwesoftware nekuti hauna kunyatso gadzirisa zvakakonzera dambudziko pakutanga.
Iyo yakanaka zano rekusimudzira yako iPad nekukasira. Izvi zvinochengetedza kopi yezvinhu zvese pane yako iPad, kusanganisira ako mafoto, mavhidhiyo, uye vanobatika.
Mushure mekutsigira yako iPad, ruka pasi kune iyo Yepamberi Software Dambudziko rekugadzirisa Matanho chikamu chechinyorwa chino. Ini ndinokuratidza maitiro ekugadzirisa zvakadzama software dambudziko nekuGadzirisazve maSystem kana kuisa yako iPad muDFU modhi, kana zvichidikanwa.
Kutsigira Up Yako iPad
Unogona kutsigira yako iPad uchishandisa komputa yako kana iCloud. Chirongwa chaunoshandisa kutsigira yako iPad kukombuta yako zvinoenderana nerudzi rwecomputer yauinayo uye software ipi yairi kuita.
Dzorera Up iPad yako Uchishandisa Finder
Kana iwe uine Mac inomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani, iwe unozosimudzira yako iPad uchishandisa Tsvaga.
Unganidza yako iPad kune Mac yako uchishandisa tambo yekuchaja.
Vhura Tsvaga .
Dzvanya pane yako iPad pasi Nzvimbo .
Dzvanya denderedzwa padyo ne Dzorera rese data pane yako iPad kune iyi Mac .
Dzvanya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Dzorera Up iPad yako Uchishandisa iTunes
Kana iwe uine PC kana Mac inomhanya macOS Mojave 10.14 kana kupfuura, iwe unoshandisa iTunes kutsigira yako iPad.
Unganidza iPad yako pakombuta yako uchishandisa tambo yekuchaja.
Dzvanya pane iyo iPad icon mune yepamusoro kuruboshwe-kona ye iTunes.
Dzvanya denderedzwa padyo ne Iyi komputa pasi Backups .
Dzorera Up iPad yako Uchishandisa iCloud
Tinya pazita rako kumusoro kwechiso.
Tinya iCloud .
Tinya iCloud negadziriro yeparutivi .
Batidza switch kuICloud Backup. Uchaziva kuti switch iripo kana iri green.
Tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Chimiro chebhawa chichaonekwa chichikuudza kuti ingani nguva yasara kusvikira backup yapera.
Ongorora: IPad yako inoda kuve yakabatana neWi-Fi kuitira kuti dzorere kuICloud.
hope zvichireva kuti mumwe munhu ane nhumbu
Dzimwe nguva iPad haizobhadharise uye kudzoka shure zvichienderana nejaja yaunovhara mukati mayo. Pakave paine mienzaniso yakanyorwa yePads kuchaja kana yaiswa mukombuta, asi kwete yerojaja.
Edza kushandisa akawanda akasiyana machaja uye ona kana yako iPad inotanga kudzokera kumashure. Kazhinji kutaura, komputa yako ndiyo yekuvimbika yekuchaja yakavimbika. Ita shuwa yekuyedzawo ese USB madoko pakombuta yako, kungoitira kana imwe isiri kushanda nemazvo.
Kana yako iPad yakafa uye isiri kudzoka kumashure, zvinokwanisika kuti pane dambudziko netambo yako yekuchaja. Tambo dzekuchaja dzinokanganisa kubhadharisa, saka nyatsoongorora mativi ese etambo yako chero zvisina kujairika.
Kana uchikwanisa, edza kukwereta tambo kubva kushamwari uye uone kana yako iPad ichadzokera kumashure. Kana iwe uchida tambo nyowani yekuchaja, tarisa idzo dziri mu Chitoro chedu paAmazon .
IPad Yako Inoti 'Ichi Chishongedzo Chingave Chisingatsigirwe'?
Kana yako iPad ichiti 'Iyi Yekuwedzera Inogona Kusave Inotsigirwa' kana iwe ukavhara yako yekuchaja tambo, tambo ingangove isiri MFi-yakasimbiswa, iyo inogona kukuvadza kune yako iPad. Tarisa uone chinyorwa chedu pane tambo dzisina MFi-dzakasimbiswa kudzidza zvakawanda.
headphone jack isiri kushanda iphone 6
Kana yako iPad iri kuzivikanwa neTunes kana Tsvaga, edza kuita imwezve yakaoma kuisazve ichinoburitswa mukombuta. Kana iyo yechipiri yakaoma reset isiri kushanda, enda padanho rinotevera uko ini ndinokurukura zvaunogona kugadzirisa.
Kana yako iPad isingazivikanwe neTunes kana Finder zvachose, panogona kunge paine dambudziko nechaja yako yekuchaja (iyo yatakakubatsira iwe kugadzirisa pakutanga kwenyaya), kana yako iPad ine nyaya yehardware. Muchikamu chekupedzisira chechinyorwa chino, isu tinokubatsira iwe kuti uwane yako yakanaka yekugadzirisa sarudzo.
Yepamberi Software Dambudziko rekugadzirisa Matanho
Zvinogoneka kuti yako iPad haizoshanduke nekuda kwedambudziko rakadzama software. Nhanho dziri pazasi dzinokufambisa kuburikidza neakawanda-akadzama maseru ekugadzirisa matambudziko anofanirwa kugadzirisa nyaya inononoka. Kana nhanho idzi dzikasagadzirisa dambudziko ne iPad yako, ini ndinokubatsira iwe kuti uwane yakavimbika yekugadzirisa sarudzo.
Dzorerazve Zvese Zvirongwa
Uku kumisazve kunodzosera zvese muZvirongwa kudzoka kune zvakasarudzika zvefekitori. Zvirongwa zvako zvichaita sezvazvaive pawakatanga kutenga yako iPad. Izvi zvinoreva kuti uchafanirwa kuseta rako Wallpaper, reenter yako Wi-Fi mapassword, uye nezvimwe.
Kugadzirisa Zvese Zvirongwa pane yako iPad:
Tinya general .
Tinya Dzorera zvakare .
Tinya Dzorerazve Zvese Zvirongwa .
Pinda yako iPad passcode.
Tinya Dzorerazve Zvese Zvirongwa zvakare kusimbisa yako sarudzo.
Yako iPad inodzima, zadzisa iyo reset, uye batidza zvakare kana iyo reset ichinge yapera.
Isa Yako iPad Mune DFU Mode
DFU inomirira Mudziyo Firmware Kwidziridzo . Tambo yega yega yekodhi pane yako iPad yakadzimwa uye kuiswazve, ichidzorera yako iPad kune yayo fekitori zvisizvo. Iyi ndiyo yakadzika mhando yekudzoreredza iwe yaunogona kuita pane iyo iPad, uye ndiyo yekupedzisira nhanho iwe yaunotora kuti ubvise zvachose chinetso che software.
DFU Dzosera maPads Nebhokisi repamba
Dhinda uye bata ese bhatani bhatani uye Kumba bhatani kusvikira iyo skrini iende nhema.
Mushure memasekondi matatu, rega bhatani remagetsi uchiramba wakabata Bhatani repamba.
Ramba wakabata Bhatani repamba kusvika iPad yako iratidzike pakombuta yako
Dzvanya Dzosera iPad pakombuta yako.
Dzvanya Dzosera uye Gadziridza .
Tarisa uone yedu vhidhiyo dzidziso kana iwe uchida rubatsiro kuisa yako iPad muDFU modhi .
DFU Dzosera maPads Pasina Bhatani Rekumba
Dhinda uye ubatisise bhatani repamusoro kwemasekondi matatu.
Ndichiri kuenderera kudzvanya uye kubata bhatani remagetsi, tinya uye ubatise vhoriyamu pasi bhatani.
Bata mabhatani maviri pasi kwemaminitsi gumi.
Mushure memasekondi gumi, buritsa bhatani repamusoro, asi ramba wakabata pasi bhatani revhoriyamu kusvikira iPad yako yaonekwa pakombuta yako.
Dzvanya Dzosera iPad .
Ongorora: Kana Apple logo ikaonekwa pane yako iPad kuratidza mushure meChitatu 4, wabata mabhatani kwenguva refu uye wotanga futi.
iPad Haizoshanduke: Yakagadziriswa!
IPad yako yadzokera kumashure! Isu tinoziva zvinoshungurudza apo yako IPI isingavhurike, saka ndinovimba iwe uchagovana ichi chinyorwa pasocial media nemhuri yako neshamwari kana vakawana dambudziko zvakare. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, tisiye isu chirevo pasi pazasi.